10 Carruur ah Oo ku Dhimatay Shuban Biyood ka Dilaacay Xereda Barakaca Sh/Hoose – Heemaal News Network
Carruurta geeriyootay oo gaaraya in ka badan 10 ayaa waxaa haleelay Cudurka Shuban biyoodka oo ka dilaacay Xerada ay ku nool yihiin oo ku taal degaanka Buufow Bacaad ee duleedka magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dadka ayaa waxaa ay kasoo barakaceen in ka badan 40 Tuulooyin oo ku yaal gobolkaas, waxaana darxumo iyo xaaladado bani’aadanimo ay halkaasi ku heysato, iyaga oo an helin wax gurmad ah.
Qaar kamid ah dadka Barakacayaasha ah oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxaa ay sheegeen inay xilligan heystaan dhibatooyin kala duwan, sida Hoygii ay ku seexan lahaayeen, Raashin ay cunaan iyo agabyo kale oo muhiim u ah nolosha Bani’adamka.
Waxaa ay ugu baaqeen Dowladda Federaalka Soomaaliya & Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed inay gurmad deg deg ah la soo gaaraan maadaama dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah ay heystaan.
Degaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ku nool kumanaan qoys oo barakacaal ah, kuwaas oo abaar iyo dagaalo uga soo barakacay degaano kale oo ka tirsan Gobolkaasi Shabeellaha Hoose.
Ciidamada Harimacad Ee Ilaaliya Injineerada Turkiga Ee Dhisaya Jidka Afgooye Oo La Qarxiyey
Muuse Biixi Oo ku Faanay Noloshiisa Gaarka Ah.
R/W Rooble Oo Oo Howlaha Doorashada U Xil Saaray Wasiiru-dowlaha Xafiiskiisa.